Amasu we-2 nge-Microstation: Ukulungisa amafayela nezinkinga nge-DWG 3D
Inkinga ye-1. ifayela DGW 3D kuvula sengathi Ubukhulu 2 kuphela akuve kuvamile ukuthi uma uvula DWG ifayela format 3D nge Microstation, evulekile sengathi engangikhuluma 2 Ubukhulu. Lokhu kwenzeka ngoba Microstation ngokuvamile isethwe ku ongakhetha zabo, ifayela imbewu (imbewu), ilingana nesakhiwo ...
Isidingo esivame kakhulu ukuthi ukwazi ukwazi izinguquko ezenzeke emephini noma imephu, uma kuqhathaniswa nokuthi kwakungakahlelwa noma njengesikhathi sesikhathi, kumafayela e-CAD afana ne-DXF, i-DGN ne-DWG. Ifayela le-DGN yindlela yokuzalwa neyomnikazi we-Microstation. Ngokuphambene nalokho okwenzeka nge ...
Vula iphasiwedi ye-VBA macro kusuka ku-Microstation
I-Visual Basic ye-Applications iyinhlangano yezincwadi ezenziwa iMicrosoft ezitholakalayo, cishe ezindala kodwa ezinamandla kakhulu ikakhulukazi ezinguqulweni zeHhovisi ngaphambi kwe-2010. Nakuba iqhubeka ikhona, izinguquko eziningi manje zenziwe ku-.NET nakwezinye izindawo; Noma kunjalo, ukuthuthukiswa okusekelwe kuma-marcros, i-VBA iyinhlangano ...
kamuva eminyakeni 10 uthuthe isiteji geospatial - Microstation Geographics - Oracle Spatial
Lena inselele ezivamile yamaphrojekthi amaningi cadastre futhi ekudwetshweni kwamabalazwe, okuyinto 2000-2010 isikhathi kuhlanganiswe Microstation Geographics njengenhlangano injini idatha ngekwendzawo, ucabangela izizathu kanje: arc node kwaba ukuphathwa futhi iyaqhubeka iba esiwusizo kakhulu yamaphrojekthi cadastral . I DGN elinye ezikhangayo, ucabangela versioned yayo kufayela elifanayo, ...
Ukusebenzisa le template, ungadonsa i-polygonal ku-Microstation, ohlwini lwama-bearings nama-distances ku-Excel, noma uhlu lwezixhumanisi x, y, z. Ichungechunge le-1: Uhlu lweziqondiso kanye namasevisi Ake sithi sinalo leli tafula lwedatha kusuka ensimini: Kukholomu yokuqala uneziteshi, ...
Kulesi sihloko sizobona ukuthi singavula kanjani, senze futhi sinele ifayela le-shp besebenzisa i-Microstation V8i, into efanayo ne-Bentley Map. Nakuba ziyifayela yama-archaic ye-16 bits, endala njengamanye - amaningi - wezinwele zami ezimpunga, akunakugwemeka ukuthi iyaqhubeka isetshenziswe kumongo wethu we-geospatial. Kusobala ukuthi lezi zindlela zisebenza ezintweni ezixhunyiwe vector ...
Imibuzo ye-8.5 Microstation ku-Windows 7
Labo abanethemba lokusebenzisa i-Microstation 8.5 namuhla kumele basebenzise i-Windows XP kwimishini ebonakalayo yokungahambisani ne-Windows 7, okubi nakakhulu kuma-64 bits. Bakhuluma ngenkinga ngomhleli wombhalo, engangikhulume ngaphambili njengesisombululo futhi ngibhekisela kumphathi wesithombe kanye noxhumano lwe-ODBC. Ake sibone ukuthi zixazululwe kanjani ...